တကယ် တော့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » တကယ် တော့	16
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 2, 2016 in Photography | 16 comments
တကယ် တော့ နိုင်ငံရေး စကား တွေ ကို ပြောဖို့ စိတ်မဝင်စားချင်ပါ။
သူတကာ ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေ ကိုလဲ ဆရာကြီးစတိုင် နဲ့ ကြည့်ပြီး မဝေဖန်လိုပါ။
နေရတဲ့ အချိန်ထဲ ရှိတာ လေး တွေ ထုတ်ကြွားရင်း လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ နေချင်တာပါ့။
ကိုယ်ပိုင် အဖိုးထိုက် လက်ဝတ်ရတနာ – bracelets
ကိုယ်ပိုင် အဖိုးထိုက် နားဝတ်ရတနာ – stud earrings
ကိုယ်ပိုင် အဖိုးထိုက် နားဝတ်ရတနာ – back stud earrings
ကိုယ်ပိုင် အဖိုးထိုက် လည်ဆွဲရတနာ – necklaces
ဒီနှစ် အစေ့ကနေ ပျိုးထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး ပင်
၂ပါတ် အကြာ အပင်ပေါက်များ
ဗြိတိသျှ စစ်စစ် စူပါမားကက် က နေ ရှားရှားပါးပါး ရလာ တဲ့ ဟာလာကြက်ဟင်းခါးသီးတဲ့။ “Asian Halal” ဆိုပြီး ကို ရောင်းနေတာ။ အရင်က မတွေ့ဘူး။ အခုမှ ရာသီစာ ဈေးကွက်ထဲ ဝင်လာတာ ထင်ရဲ့။ ရေခဲရိုက် ပေမဲ့ ချက်တော့ fresh ကို ချက်သလိုပါဘဲ။ ရေခဲရိုက်ကိုဘဲ အပူနဲ့ တန်းချက်ခိုင်းတာ။
ဒါက ဟာလာ ရုံးပတီသီး။ အသီးအနှံ တွေ ကို ဟာလာ ခေါ်တာ အခုမှ ကြားဖူးတယ်။ မဟာဗြိတိသျှများ ထွင်တာလားတော့ မသိ။
မြစပဲရိုး says: အမှန်တော့ အဲဒီ ဖန်စီ ရတနာလေးတွေ ကို ဇီဇီ့ ရဲ့ ဖန်စီပို့စ် ရဲ့ ကွန်မန့်ထဲ မှာ ထည့်ပေးပါ လို့ သူကြီးမင်း ကို Request လုပ် ပြောခဲ့ပါတယ်။
အရေးမလုပ်ဘဲ နေလို့ ကိုယ့်ဟာကို ပို့စ်လုပ်ကာ အခုမှ ကြွားစ်ရတာ။ :-)))
မမချွိ says: အမ်မလေးးး
အရီးးး တညားးးကို မွေးးစားးပါ…
ကြိုက်လိုက်တာနော်… နားဆွဲ လက်ကောက် ခွေဇီပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဟိ။ တို့ တူဝရီး တူချက်။
ဂလို အပေါစားလေးတွေ ကို ဂယ်ဘဲ ကြိုက်ရင် နောက်တစ်ခါ ပို့ လိုက်မယ်။ နားပေါက်ရှိလား ဇီကလေး။ :-)))
ဘရန်းဒက် တွေ၊ စိန် ရွှေ ရတနာ အစစ် တွေ နဲ့ မချမ်းသာဘာဘု။ သို့သော် ဒီလို ဟာလေးတွေ နဲ့ စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
မမချွိ says: နားး က ဘယ် ၂
နောက်ရက်မှ ချမ်းသာသမျှ တင်အူးးမယ်…
အကြောင်းသိတွေဆို မဝယ်နဲ့တော့နော်လို့ တားးရတော့တာ..
ဒါလည်းး စိတ် မနိုင်ဘူးးး
ဖန်စီ က လူကို ပိုလှစေတယ် အရီးးရဲ့ .. ဟိ..
ဂျစ်စူ says: ကြောင်လျှာသီး ဟာလာကော ရှိလား
မရှိရင် ရွာထဲမှာ ဖမ်း
kai says: ဖန်စီတချို့တွေ.. ပါကင်တောင်မပျက်သေးဖူး..။ သုံးရောနေရဲ့လားမသိ…။
ခုမှ.. အသီးအနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်လည်း.. အိုကေတယ်ဆိုတာသိ..။
moonpoem says: အသီးအနှံ မမြင်ဘဲ ဖန်စီတွေသာ မြင်နေမိပါကြောင်း ၀န်ခံပါသည်ရှင့် :D
မြစပဲရိုး says: ဇီ – ဟုတ်ပါ့။ လှတဲ့ အပြင် ကျပျောက်လဲ ကိစ္စမရှိ။ စိတ်လဲ အေးအေး နေလို့ ရတယ်။
စိန်ပေါက်လေး – ကြောင်လျှာသီး တော့ ဒီမှာ ရောင်းတာ မတွေ့ဘူး။
တစ်ချို့ မြန်မာပြည် က ပြန်ရင် သယ်လာကြတယ် ပြောတာဘဲ။
သူကြီးမင်း – တွေ့တယ်လား။ဟုတ်ပါ့။ တစ်ချို့ ဟာ တွေ က ကွကိုယ် အသက် မေ့ပြီး ဝယ် မိပြီး နောက်မှ ကို့ရို့ကားယား မဖြစ်ပါဘူးလေ တွေးမိပြီး ဒီအတိုင်းထားတာ။
ကလေး ကလဲ မိန်းကလေး သိပ်မဆန်ချင်ဘူး။
ဟာလာ ဆိုတာ ကို လှီးဖြတ် သန့်စင်ပြီး လို့ ဒီမှာ အနက်ယူ နေလားတော့ မသိ။
လကဗျာ – အသီးအနှံ တွေ က ချက်ပြီး မဟုတ်လို့ သိပ် ဆွဲဆောင်မှု မရှိတာ ထင်ရဲ့။ ကျေးဇူးနော်။ :-))
ဂျက်စပဲရိုး says: ဖန်စီ ပစ္စည်း ဆိုမှ
ဟိုတလောက ရုံးက အကိုကြီး တစ်ယောက် သားရေလက်ပတ်ကြိုး ရောဂါ ထ တာ။
အဲဒီတော့မှ ကြည့်မိတယ်။ တကယ့် ဘရန်းဒက် တွေ ဆို ဒီ ဘာမှ မဟုတ် တဲ့ သားရေ လက်ပတ်ကြိုးလေး တစ်ခု ကိုတောင် ဒေါ်လှ ၅၀၀ လောက် ရှိသဗျ။
Thint Aye Yeik says: ခရမ်းချဉ်သီးကို အဲ့လိုလေး စိုက်ထားတာ မြင်တော့. . . မြေတွေ ခြံတွေ မရှိသေးလည်း အဲ့လိုလေး စိုက်လည်း ရတာပဲ လို့တွေးမိ။
စိုက်ဖို့ ချောင်းအုန်းမယ်။နှစ်သက်တဲ့အသီးအနှံထဲမှာ ခရမ်းချဉ်သီးလည်း ပါ။
Yae Myae Tha Ninn says: ဖန်စီ ပစ်စည်းတွေ ကြည့်ပြီး အရီးက အနော်နဲ့ အသက် သိပ်မကွာဘူး ထင်မိနေပြီ… ဂဇက်မှာ ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ရတာ ကောင်းအောင် အသက်ကြီးချင်ယောင်ဆောင်၊ စကားခန့်ခန့်ကြီးတွေ ပြောနေတာလို့ ထင်မိတယ်… :P
လုံမလေးမွန်မွန် says: Necklaces & Earrings!!!!!!!!!
(Can’t type mm font )
ဦးကြောင်ကြီး says: လော်ဘီခနဲ့ ဝယ်ဒါရား။။။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: အော်..အော်..သူထိန်းမဂျီးက ဓါးပြတိုက်မှာကြောက်လို့ အတုတွေပဲထုတ်ပြတာပေါ့လေ…ခိခိ ခရမ်းချဉ်ပင်လေးတွေစိုက်ထားတာသဘောကျတယ်ဗျ…စိုက်အုံးမှ
အောင် မိုးသူ says: ဖန်စီလေးတွေက မခင်ဇော် အားကျစရာနော်….။ အသီးအနှံကို ဟာလာဆိုတော့ အသီးအနှံကို လည်လှီးထားတာလားမသိ ဟိဟိ။
မြစပဲရိုး says: ဝင်ရောက် အားပေးသူများ အားလုံး ကျေးဇူးကြီးပါ။ <3 ဂျက် -ဟုတ်ပါ့။ အရီး က တော့ ကျ ပျောက်လဲ မနှမြော ရတာ ဘဲ ဝယ်ပါတယ်။
ဆက်ဆက် – ဒီမှာ အဲဒီလို အိုး နဲ့ စိုက် လို့ ရ အောင် အသင့်ရောင်း တွေ ရှိတယ်။
နင်းနင်း – တကယ်တော့ မင်းထက် ငယ်ပါတယ်။ ပေါက်ကရ ပြောရင်း ကြီး သွားတာ။ တကယ်။
lone ma – <3
ကြောင်ကြောင် – နာ့ ဂို ဖွတ်လော်ဘီ လို့ ပြောတာလား။
ကကြီးမိုက်- အတွင်းပစ္စည်း ရှိမှ သူထိန်းဆိုရင်တော့ ကျွန်မ ပါးပါးလျားလျား လေးပါ။
အခု အပင်တွေ က မိုးများပြီး tတစ်မျိုးဖြစ်။
မောင်အောင် – ဤလိုဘဲ ထင်ပါ့။